သတို့သားရဲ. ကျားအဂါင်္ကို မြင်ပြီး လန့်သွားလို့ ပုလင်းနဲ့ခေါင်းရိုက်ခွဲလိုက်တဲ့ သတို့သမီး | Buzzy
သတို့သားရဲ. ကျားအဂါင်္ကို မြင်ပြီး လန့်သွားလို့ ပုလင်းနဲ့ခေါင်းရိုက်ခွဲလိုက်တဲ့ သတို့သမီး
မနွမ်ဘို မက်ဒ်ယီဘီ အမည်ရှိ အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ သူရဲ. အသစ်စက်စက် ဇနီးသည်နဲ့ တောင်အာဖရိက ကမ်းခြေမြို.လေးကို ဟန်းနီးမွန်းထွက်ခဲ့ချိန်မှာ အခုဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။
မနှမျဘို မကျဒျယီဘီ အမညျရှိ အသကျ ၃၂ နှဈအရှယျ အမြိုးသားတဈဦးဟာ သူရဲ. အသဈစကျစကျ ဇနီးသညျနဲ့ တောငျအာဖရိက ကမျးခွမွေို.လေးကို ဟနျးနီးမှနျးထှကျခဲ့ခြိနျမှာ အခုဖွဈရပျ ဖွဈပှားခဲ့တာပါ။
ဖြစ်စဉ်မှာ အပျိုစင်သတို့သမီးငယ်က မနွမ်ဘို မက်ဒ်ယီဘီ ရဲ. ကျားအဂါင်္ကို ပထမဆုံး အကြိမ်မြင်တွေ့ပြီး ထိတ်လန့်ကာ သတို့သားရဲ. ခေါင်းကို ဝိုင်ပုလင်းနဲ့ ရိုက်လိုက်မိပါတယ် ။ သူမက သတို့သားဟာ ကြောက်စရာ အမွေးထူထူ သခွားသီးကြီးလိုပဲလို့ ဆိုပါတယ် ။ မနွမ်ဘို မက်ဒ်ယီဘီကလည်း ဇနီးသည်ရဲ. လုပ်ရပ်ကြောင့် ပါးရိုက်ပြီး ဘက်စ်ကားစီးကာ အိမ်ပြန်သွားကြပါတယ်။
ဖွဈစဉျမှာ အပြိုစငျသတို့သမီးငယျက မနှမျဘို မကျဒျယီဘီ ရဲ. ကြားအဂါင်ျကို ပထမဆုံး အကွိမျမွငျတှပွေီ့း ထိတျလနျ့ကာ သတို့သားရဲ. ခေါငျးကို ဝိုငျပုလငျးနဲ့ ရိုကျလိုကျမိပါတယျ ။ သူမက သတို့သားဟာ ကွောကျစရာ အမှေးထူထူ သခှားသီးကွီးလိုပဲလို့ ဆိုပါတယျ ။ မနှမျဘို မကျဒျယီဘီကလညျး ဇနီးသညျရဲ. လုပျရပျကွောငျ့ ပါးရိုကျပွီး ဘကျဈကားစီးကာ အိမျပွနျသှားကွပါတယျ။
မနွမ်ဘို မက်ဒ်ယီဘီ ရဲ. ကျားအဂါင်္ဟာ သူ့ရဲ. ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာလည်း ကြီးမားလွန်းတယ်လို့ နာမည်ကြီးပါတယ် ။ သူငယ်ချင်းတွေက သူ့ကို အန်နာကွန်ဒါ မြွေလို့တောင် နာမည်ပြောင် ပေးထားကြပါတယ်။
မနှမျဘို မကျဒျယီဘီ ရဲ. ကြားအဂါင်ျဟာ သူ့ရဲ. ကြောငျးက သူငယျခငျြးတှကွေားမှာလညျး ကွီးမားလှနျးတယျလို့ နာမညျကွီးပါတယျ ။ သူငယျခငျြးတှကေ သူ့ကို အနျနာကှနျဒါ မွှလေို့တောငျ နာမညျပွောငျ ပေးထားကွပါတယျ။
ဆေးရုံပေါ်က အလောင်းကောင်ထဲကနေ ဝိဥာဉ်ထွက်သွားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် ရေပန်းစားနေ